Doorashooyinka Aqalka hoose ee beelaha gobolada waqooyi ee Somaliland oo la hakiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashooyinka Aqalka hoose ee beelaha gobolada waqooyi ee Somaliland oo la hakiyay (AKHRISO)
War-qoraal ah ay barta Twitter-ka soo dhigeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaaal ayay ku sheegeen in gebi ahaan la hakiyay doorashada xubnaha Aqalka hoose ee ka imaanaya gobolada waqooyi ee Somaliland ilaa iyo inta laga xalinayo khilaafka ka taagan doorashadaas.
Khilaafkaasi ayaa la sheegayaaa inuu salka ku haayo soo xulista ergooyinka dooranaya beelaha dega gobolada waqooyi, taas oo buuq ka dhex dhalisay guddiyada doorashooyinka dalka.
Sidoo kale, khilaafkaan ayaa qeyb ka ah loolanka xoogan ee u dhaxeeya madaxweynaha dowladda federaaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid, kuwaas oo ku dagaalamaya xubnaha ka imaanaya gobolada waqooyi ee Somaliland.
Ilaa 19 kursi oo ka soo jeeda beelaha Somaliland ayaa labadii todobaad ee lasoo dhaafay lagu doortay magaalada Muqdisho, iyadoo 46 xildhibaan ay yihiin tirada kaga soo aaday Aqalka hoose, waxaana weli dhiman 27 xildhibaan.
Dhinaca kale, waxaa muran aad u xoogan uu ka jiraa doorashada xubnaha Aqalka sare ee gobolada Waqooyi, kuwaas oo aan wali lasoo dooran, iyadoo maamulka Puntland ay weli diidan yihiin labada xubnood ee kasoo galaya gobolada Sool iyo Sanaag in lagu doorto magaalada Muqdisho.
Khilaafyada cusub ee kusoo kordhay hanaanka doorashada iyo dhameystir la’aanta doorashada Aqalka hoose ayaa waxay keeni karaan dib u dhacyo hor leh, iyadoo khamiistii la soo dhaafay uu dib u dhac ku yimid dhaarintii xildhibaanada.
Si kastaba, waxaa weli shaki laga qabaa in doorashada sanadkaan ay dhici weyso islamarkaana ay lugaha la gasho sanadka 2017, marka la eego howlaha harsan iyo waqtiga la heysto ee inta ka dhiman bishan December oo aad u kooban oo ay maalmo yar kaliya ay ka harsan yihiin.